08-26-2014 12:22 PM #631
Originally Posted by kjn-myanmar
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. လိပ်စာလိုအပ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကို အမေရိကားမှာ နေနိုင်တဲ့ လိပ်စာ တခုလောက် မစပါလားဗျာ.. ကျေးဇူးပြုပြီး ပီအမ် နဲ့ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော် ဗီဇာ ရပါပြီ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျွန်တော်ကို ဖြေကြားတဲ့သူအားလုံးကို ..အမေရိကားမှာ တွေ့ကြမယ်..ဗျာ..
gugunge, Jin_kaleat, kohtwe, MNO.BN, SLADE, yokesoe
03-14-2015 05:33 PM #632
Thanked 526 Times in 25 Posts
usL;ypfurdwfaqGrsm;udktultnDwckavmufawmif;csifygw,f...om;udktudkvdkcifwJYtar&duefedifiHom;NrefrmvlrdsK;u arG;pm;rvdkYb,fvdkvkyf&rvJqdkwmod&ifvrf;nGefay;Muy g..... om;u17ESpfyg/arGpm;rJYoluyifpifpm;yg...tck&efukefa&mufaewmwpfESpfaMumfaeNyD/aus;Zl;wifvsuf.....
03-15-2015 01:12 AM #633
Originally Posted by maysan
odwJh? uRrf;usifwJholawG rajzao;cif uRefawmf0ifajymMunfhay;r,faemf... taumif;qHk;u arG;pm;csifwJh tar&duefEdkifiHom; jrefrmvlrsdK;u &efukefrSm½SdwJh tar&duefoH½Hk;udk t&ifqHk; qufoG,f? tultnDawmif; ar;jref;Munfhwm taumif;qHk;ygcifAs/
uRefawmfawGUwmawmh jrefrmEdkifiHu Hague Adoption Convention tzGJU0ifEdkifiHawmh r[kwfbl;vdkU awGUygw,f/
maysan, meJit, mgknow, MNO.BN, shadow69, SuperPooh, THIHA, tiptop
03-21-2015 02:30 AM #634
Thanked 1,079 Times in 84 Posts
It is very unlikely to get approval from US government agency (US Immigration) at the age of 17. You may have more chances if you are under 14. There isalengthy process to get approval from the state where he lives in US too. (vary by state) Try TOEFL and get student visa instead.
maysan, mgknow, MNO.BN, weithet
12-18-2015 06:36 AM #635
အလည်အပတ်လာတာ ၆လပြည့်၇င် ဘယ်လိုသက်တမ်းတိုး၇မလဲ ဆိုတာလေးပြောပေးကြပါအုံး
online ကဆိုလည်း မလုပ်တတ်ဘူး သေချာပြောပြပေးပါအုံး .......
12-18-2015 01:01 PM #636
oufwrf; 6-v rjynfhcif ,ltufpfrSm aexdkifcGifh oufwrf; xyfwdk;Edkifygw,fcifAsm/ USCIS uawmh oufwrf;rukefcif 45 &uf BudKNyD; avQmufoifhw,fvdkU a&;xm;ygw,f/ 45 &uf rukefcif BudKavQmufEdkif&ifawmh taumif;qHk;yg? 45 &uf ausmfoGm;vnf; avQmufwJhpm USCIS accepted date u oufwrf;rukefcifqdk&ygw,f/ USCIS-ELIS Online uae t&ifu vkyfvdkU&ayr,fh uRefawmf oGm;Munfhwm ckavmavmq,f online uae vufrcHbJ? pmwdkufuaeyJ ydkUNyD; avQmufEdkifygw,f/ Form: I-539 avQmuf&ygr,f? I-539 Fee $290 wygwnf; ay;vdkuf&ygr,f/ USCIS tGefvdkif; qdk'frSm aocsmoGm;zwfNyD; avQmuf&r,fh I-539 udk a'gif;vkyf vkyf? y&ifhxkwf? aocsmav; jznfh? vdktyfr,fh ywfpfydkU aumfyD? I-94 aumfyD? wjcm; olwdkU awmif;xm;wJh pm½Gufpmwrf;rSeforQ aocsmppf? ygatmifxnfhNyD; refeDatmf'g odkU csuf eJU pmwkdufuae ydkUNyD; avQmuf&yghr,f/ atmufrSm uRefawmfoGm;zwfxm;wmav; jyefwifay;xm;ygw,f/ tqifajyygapcifAsm...
If you want to extend your stay in the United States, you must filearequest with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) on the Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status before your authorized stay expires. If you remain in the United States longer than authorized, you may be barred from returning and/or you may be removed (deported) from the United States. Check the date in the lower right-hand corner of your Form I-94, Arrival-Departure Record, to determine the date your authorized stay expires. We recommend that you apply to extend your stay at least 45 days before your authorized stay expires.
http://www.uscis.gov/sites/default/f...orm/g-1145.pdf - Form G-1145 udkyg jznfhNyD; wygwnf; xnfhay;vdkuf&if USCIS u avQmufwJhpmudk vufcHwJhtcg tD;ar;vf odkU zkef;rufaqhcsf udk ay;xm;wJhqDudk status update ydkYay;ygvdrfhr,fcifAs...
Last edited by PiNyat; 12-18-2015 at 01:17 PM. Reason: added G-1154 info:
hotrod, Jin_kaleat, tiptop
12-19-2015 06:44 AM #637
ပြည့်စုံအောင် ပြန်ဖြေပေးတဲ့ ကို PiNyatေ၇
ကျေး ဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်....
03-29-2018 09:17 AM #638
မြန်မာ ပတ်စပို့သက်တမ်းတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေလို့ပါ ..
အဆိုင်လန်တင်ထားပီး work permit နဲ့နေတဲ့သူကို
ဘာတွေတင်ပြပီး သက်တမ်းတိုးရမလဲဆိုတာလေး ပြောပြကြပါလားရှင့်
04-01-2018 05:35 PM #639
ဘာတွေတင်ပြပီး သက်တမ်းတိုးရမလဲဆိုတာလေး ပြောပြကြပါလားရှင့်
ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးဖို့ ဘာတွေလိုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ၀ါရှင်တန် မြန်မာသံရုံးကို ဖုန်းခေါ်ပြီး မေးကြည့် ကြည့်ပါလား။ သူတို့မှာ မေးရင် ပြောပြဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင်က ပြည်ပမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးများကို ပြည်ပနေ မြန်မာများကို အကူအညီပေးဖို့ မှာထားတယ်ဆိုတော့ကာ...
အောက်ကလင့်ခ်ကတော့ မြန်မာသံရုံး လင့်ခ်ပါ။
Asylum တင်ထားပြီး ဘာလို့ မြန်မာ ပတ်စ်ပို့ ကို သက်တမ်းတိုးမှာလဲ။ Asylum တင်တယ်ဆိုကတည်းက မိမိမူရင်းနိုင်ငံမှာ နေလို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ပါဆိုပြီး အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီး လျှောက်ထားခဲ့တာမလား။ U.S Law အရဆိုရင် Asylum ကျပြီး Green Card ကိုင်ထားတဲ့သူတောင် မိမိမူလနိုင်ငံကို ပြန်တာ သိရင်၊ အကြောင်းပြချက် မပေးနိုင်ရင် terminate လုပ်ခံရပါမယ်။ U.S မှာ မနေတော့ဘဲ အပြီး ပြန်တော့မှာမလို့ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်။
flintz, Jin_kaleat, kokoko123, kosatsu, mgmgthan, oasis, sideeffect, THIHA, tiptop
12-07-2018 09:09 PM #640
W2 နဲ့ 10 99 အခွန်ဆောင်တာ
ဘယ်လို ကွာခြားသလဲ သိချင်လို့ပါ ..
အလုပ်က w2 နဲ့ ဆောင်ရင် ဘာတွေပေးရမလဲ ? ဘာတွေတောင်းရမလဲ ဆိုတာလေးတွေ သိရင်ပြောပြကြပါအုံးနော်